Wax walba oo ku saabsan kulanka adag Arsenal iyo Fulham %
Laacib Sports : Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Naadiga Fulham kulamada u dambeeya Boxing Day maanta si lamidana ah cayaaraha 21-aad ee Premier League-ga oo maanta dib i bilaabanaya.
Kooxda uu hogaamiyo Macalin Emre Ee Arsenal ayaa xasuuq ba’an la kulantay horaantii iscuubaan markii qasaaro 5-1 ah ay kala soo laabteen hogaamiyaasha Liverpool kulankii Anfield lagu soo ciyaaray.
Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa qiimeyn doonta Mesut Ozil kaddib markii laacibka Jarmalka uu seegay kulankii guudarrada kasoo gaartay Liverpool sababo la xariira cabasho jilib uu ka qabay.
Laacib ka Nacho Monreal ayaa wajahaya inuu la dagaalamo dhibaato muruqa ah halka dhanka kale xiddigaha mudada dheer maqan ay ka mid yihiin Rob Holding, Danny Welbeck iyo Henrikh Mkhitaryan.
Dhanka kale Kooxda Fulham Laacib ka uga ciyaara Daafaca Alfie Mawson ayaa suurta gal ah inuu maqnaado kaddib markii uu u muuqday inuu dhaawac jilibka soo gaaray kulankii ay guusha ka gaareen Huddersfield ay kaga badiyeen 1-0 waxaana goolkaasi guusha u dhaliyay Aleksandar Mitrovic daqiiqadihii dheeriga ahaa ee qeybtii dambe .
Ciyaaryahan ka qadka dhexe Andre-Frank Zambo Anguissa ayay suuragal tahay inuu kasoo laabto dhaawac anqawga, Kooxda Arsenal ayaa marnaba qasaaro garoonkeeda kala kulmin Fulham tartan kasta muddo 114-sanaa (23 guul, iyo 5 bar-baro ah).
Geesta kale hadii aan eegno dhanka taariikhda Kooxda Fulham ayaa guul 1-0 ka gaartay mar hore ay kooxahan u kulmeen maalinta sanadka cusub 1966 cayaar ka dhacday garoon ka ay leedahay kooxda Fulham.
Arsenal iyo FulhamArsenal vs Fulham